Ogaden News Agency (ONA) – Haayadaha Xuquuqul Insaanka u ololeeya oo Ethiopia ka guuray iyaga oo ka xun laba wajiilanimada Ree galbeedka
Haayadaha Xuquuqul Insaanka u ololeeya oo Ethiopia ka guuray iyaga oo ka xun laba wajiilanimada Ree galbeedka
Posted by ONA Admin	/ December 20, 2012
Haayadaha Xuquuql Insaanka ee ka howlgala wadanka Ethiopia ayaa canbaareyn kulul usoo jeediayay Wadamada ree galbeedka oo ay ku sheegeen inay yihiin ama ku dhaqmaan laba wajiilanimo. Waxa Haayadaha Xuquuqul Insaanku soo saareen warbixino aad uga deyrinaya habdhaqanka Wadamada ree galbeedka oo dhagaha ka fureystay xasuuqa joogtada ah ee taliska gumeysiga Ethiopia kula kaco qowmiyadaha Ethiopia. Wadamada Ree galbeedka ayaa ugu abaal guda taliska Ethiopia in loo kordhiyo deeqaha lacagta ah ee tooska loo siiyo taliska TPLF. Arrintaas ayaa keentay in haayadaha Xuquuqul insaanku isaga guuraan gabi ahaanba Wadanka Ethiopia.
Bangiga Adduunka ee World Bank ayaa u cusboonaysiiyay Taliska Ethiopia heshiiski uu kula jiray Ethiopia isaga oo siinaya lacag dhan $4 Billion saddex sanno gudahood inta u dhaxeysa 2013 – 2016. Heshiiskan ay World Bank lagaleen Ethiopia ayaa dhacay 19 December 2012 waxaana lacagahaas loogu talo galay in lagu hormariyo adeega bulshada balse gumeysiga Ethiopia ayaa u adeegsada lacagahaas deeqda ah arrimo siyaasadeed.
Sidookale Haayada Qaramada Midowday ee UNDP ayaa heshiis ay la gashay taliska TPLF ku ansixisay in UNDP ay taliska Ethiopia ka caawin doonto inay dhexdhexaadiso wadamada deeqda bixiya isalamarkaasna ay UNDP noqoto haayada qaramada midowday ka socota ee dabagalka ku sameynaysa dhaqalahaas qaabkii loo isticmaalay. UNDP oo ah haayada qaramada midowday u qaabilsan Qorshayaasha la xidhiidha horumarinta ayaa hadda ka hor laga deyriyay nidaamka ay dabagalka ugu sameeyaan wadanka Ethiopia oo illaa hada laga heyn nidaam transparency ah oo lawada arki karo.
Hadaba Haayadihii ugu danbeeyay ee ka guura wadanka Ethiopia gabi ahaanba ayaa waxaa kamida Haayada Heinrich Böll Foundation oo ah haayad aan dowli ahayn una ololeysa xuquuqda bani aadamka oo kasoo jeeda wadanka Germany. Haayadan ayaa canbaareysay Qaramada midowday oo taliska Ethiopia ku taagertay inay isu sharaxdo United Nation Human Rights Council.
Hadaba Haayadan oo ka shaqeysa Arrimaha Dimoqradiyada iyo xuquuql insaanka ayaa soo bandhigtay warbixino xasaasi ah oo sheegaya in wadanka Ethiopia ka jirin wax Dimoqradiyad ku lug leh islamarkaasna taliskaas uu yahay talis ku tunta xuquuqda asaasiga ah ee bani aadamka. Haayadan oo cadaadis badan saareysa beesha caalamka ayaa xafiiski ay ku laheyd wadanka Ethiopia albaabada usoo xidhay cabashooyin aad u xoog badana u gudbisay wadamada ree galbeedka oo ay ku sheegeen inay laba wajiilanimo ku dhaqmayaan.
Haayadaha Xuquuql insaanka iyo ururada jecel cadaalada iyo nabadgalyada ayaa ku taageray Heinrich Böll Foundation talaabada ay qaateen oo ah mid la filayo in haayado badan oo kale ay ku dayan doonaan haddii isbadal dag dag ah ay sameyn waayaan wadamada Ree galbeedka ee sida xad dhaafka ah u siiya taliska gumeysiga Ethiopia lacagaha lagu xasuuqo shacabka Ethiopia.